saldhiga booliska Magaalada Dhuusamareeb oo xariga laga jaray. - Bulsho News
Waxaa kasoo qeyb galay furitaanka Xafiiska Mas’uuliyiin Sare oo ka tirsan Dowlad goboleedka galmudug sida Xildhibaanno, Wasiiro, Maamulka Degmada, Saraakiil Boolis iyo Ururada Saxaafadda Dhuusamareeb .
Taliyaha Saldhiga Booliiska, Gashaanle Maxamed Xasan Warsame ayaa ugu horreyn Xafiiska kusoo dhaweeyay Mas’uuliyiinta ka qeyb gashay Xafladda, waxa uuna u mahadceliyay bulshadii gacanta ka geysatay hirgalinta dhismaha Xafiiskan Cusub.
Guddoomiyaha Gudigga bilic soo celinta Dhuusamareeb Mudane Shariif Maxmaed Geedi oo dhankiisa ka waramey howsha is-xilqaanka ah ee Dhuusamareeb ka socota ayaa tilmaamey in ay muhiim tahay sii wadisteeda.
Guddoomiyaha Degmada Dhuusamareeb Abdirahman Cali Maxamed (geeda-qorow) oo ka hadlay ayaa si guud ugu mahadceliyay Saraakiisha ku howlan dib udayactirka fadhiyada muhiimka ah ee Saldhiga, sidoo kalena sheegay in ay ka maamulka ahaan ku gacan siinayaan Taliska.
Gashaanle Sare Khaliif Cabdullaaahi Maalin, Taliyaha Qeybta guud ee Booliiska Galmudug ayaa Mas’uuliyiinta ka qeyb galay Munasabada ka Codsaday in si wada jir ah looga qeyb qaato dhismaha Xabsi Cusub oo uu yeesho Saldhiga, taas uu sheegay in baahi weyn looqabo.
Farmaajo: “Soomaaliya waxaa ka dhacaysa doorasho xor iyo...